ဖက်ရှင်ပုတီးစကား - ကုဗ zirconia နှင့်အတူရွှေ, ငွေ, ရွှေဖြူ, သံကြိုး, ပုလဲ
အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေး Ladies လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ကထွက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်သူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီအလေးပေးဖို့ချစ်ကြတယ်။ တလမ်းတည်း - လက်ဝတ်ရတနာ။ ပုတီး, စကားရှည်သမိုင်းရှိသည်, သို့သော်၎င်း၏ပိုင်ထိုက်သောနှင့်ထူးခြားမှုကိုသူတို့ရှိသမျှသည်မိန်းမတို့အဘို့လုံးဝသင့်လျော်သောတကယ်တော့တည်ရှိသည်။
ပုတီး fit စေရန်, broaches?
သင်သည်လက်ျာမော်ဒယ်ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်ပုတီးချွင်းချက်မပါဘဲအားလုံးမိန်းမတို့အဘို့သင့်လျော်သော prodevki ကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာပြောနိုင်ပါသည်။ သူတို့ဟာ finesse ပျော့နှင့်တွန်းလှန်ပိုင်ရှင်အလေးပေး။ ကြောင့်ဒီအလှဆင်မျက်နှာကို၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အလေးပေးဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းထိုသို့အထူးသဖြင့်လှည့်လည်ခြင်းနှင့်စတုရန်းမျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်ရန်အကြံပြုသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကအမြင်အာရုံ neater features တွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အနုပညာရှင်တွေဝယ်လိုအားအကွာအဝေးအဆက်မပြတ်မွမ်းမံဆိုတဲ့အချက်ကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရွှေပုတီး-prodevki ဖက်ရှင်အကြားအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်သတ္တုချွင်းချက်မပါဘဲအလုံးစုံတို့အဘို့သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , စျေးအကြီးဆုံးနှင့်အဆင့်အတန်းတွေထဲကစဉ်းစားသည်။ ဒါဟာမဆိုပုံရိပ်ဖို့ဇိမ်ခံနှင့်စတိုင်ကိုငါပေးမည်။ ရှေးခယျြစရာများထဲတွင်ရိုးရာအဝါရောင်ပစ္စည်းအလှဆင်ရှိပါတယ်။ သငျသညျမူရင်းကြိုက်နှစ်သက်လျှင်မူကား, သင်ပန်းရောင်, အဖြူရောင်ရွှေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မူကွဲသို့မဟုတ်တို့ကိုပေါင်းစပ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သငျသညျအဖြူရောင်သတ္တုနဲ့တူပါလျှင် - အလွန်ဂုဏျသိက်ခာရှိရှိကြည့်ပုတီး, ငွေ prodevki ။ ဒါ့အပြင်ဗေဒဂုဏ်သတ္တိများ, ဒီပစ္စည်းကိုမဆိုမတည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါဘူး။ သူကလှပတောက်ပဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ထုတ်ကုန်မိုက်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပျက်ပါကပင်အိမ်မှာသန့်ရှင်းခြင်းကိုခံရနိုင်ပြီး, ကနောက်တဖန်မူရင်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရရှိသည်။ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူများအတွက်စံပြဖြစ်သောနေ့စဉ် wear နှင့်ကြော့တက်သည်ကောက်နှင့်ရတနာနိုင်ပါတယ် ညနပေိုငျးစားဆင်ယင် ။
မိန်းကလေးများအကြားအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များကွင်းဆက်ပုတီးဆွဲနေကြသည်။ သူတို့ကလက်ဝတ်ရတနာစတိုးဆိုင်များတွင်ကျယ်ဌန်ရှိသည်, သင်မူကား, ထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုချင်လျှင်, သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလို့ငှာမာစတာအောင်နီးပါးမည်သည့်ဆန္ဒကိုတစ်ဦးအဖြစ်မှန်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအဆင်တန်ဆာအင်္ဂါရပ်များနံပါတ်နေသောခေါင်းစဉ်:
ထိုထုတ်ကုန်အများစုမှာတစ်ဦးဇစ်မရှိကြပါဘူး။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းခုနှစ်, အပြုသဘောအမှတ်အလှဆင်လျော့နည်းအလေးချိန်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းမှာလည်းအနိမ့်သည်။ , ပုတီး၏ဖြစ်နိုင်သောအရှုံးအကြောင်းကိုစကားမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ Jewel ဂရုတစိုက်လုံခြုံတဲ့မထိုက်မတန်သေချာတဲ့ချိန်ခွင်လျှာတွက်ချက်။
ပုတီး, အမြင်အာရုံမျက်နှာကိုများ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်မဆိုတည်ဆောက်၏မိန်းမတို့အဘို့သင့်လျော်သော broaches ။
ကုဗ zirconia နှင့်အတူ Prodevki ပုတီး
မကြာခဏဆိုသလိုအမြိုးသမီးမြားကုဗ zirconia စကားနှင့်အတူပုတီးကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာအတုကျောက်မျက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကြောင့်အလင်း၏အထူးအလင်းယိုင်ဖို့ကစိန်ယုတ်ညံ့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထွန်းလင်း၏လက်ဝတ်ရတနာအတွက်အထူးသဖြင့်စျေးကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကအရောင်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်ဥဿဖရား, နီလာ, garnet, aquamarine နှင့်ပင်စိန်ကိုလိုက်နာရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာသိပ္ပံပညာရှင်များထူးခြားတဲ့လာဗင်ဒါအရောင်ကိုမဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကထူးခြားတဲ့နှင့်ထုတ်ကုန်များတွင်လှပသောကြည့်ရှုသည်။
ရှေးခေတ်ကကတည်းကအဆင်တန်ဆာ, ကျောက်တွေနဲ့ချယ်လှယ်ကြပြီတန်ဖိုးထား။ သူတို့ကအလွန်ရေပန်းစားခဲ့ကြခြင်းနှင့်သူတို့တစ်တွေသည်အထူးစိတ်လှုပ်ရှားနဲ့ကုသကြပါတယ်။ ပုတီး, ရွှေနှင့်စိန်စကားတစ်မိသားစုအမှေပုံပါအထူးပစ်စညျးစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မျိုးဆက်မှမျိုးဆက်မှမိမိတို့၏အမျိုးအနွယ်မှအပေါ်လွန်နေကြသည်။ ယနေ့တွင်ဒီအစဉ်အလာကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နေဆဲနှင့်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များအလှအပနှင့်ဇိမ်ခံတခါပိုပြီးများနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ။ သူတို့ရဲ့တွန်းလှန်ထွန်းလင်းနှင့်ကြာရှည်ခံမှု - ကိုအကောင်းဆုံးသက်သေပြ။
ပုတီး, ဥဿဖရားနှင့်အတူ broaches
ဥဿဖရားကျောက်ကောင်း၏ဒုတိယအုပ်စုပိုင်။ သငျ့လျြောသောအပြောင်းအလဲနဲ့အတူကအလင်း dazzling သိရသည်။ အပြာ, ပန်းရောင်, အဝါရောင်, ကော့ညက်နှင့်အခြားရွှဲအပူ၏သဘောသဘာဝသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအရာ: သဘာဝ, အတော်ကြာအရောင်များရှိရလိမ့်မည်။ အဆိုပါကျောက်သလင်း၏သဘာဝအရိပ်နှင့်အတူရွှေဖြူနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Prodevki ပုတီးအလွန်စျေးကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်အတုအားဖွငျ့အောင်မြင်ခဲ့သည့်သေံ, ပိုပြီးအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။
ပုလဲနှင့်အတူ Prodevki ပုတီး
ပုလဲ prodevki ရွှေပုတီးထက်ပိုဣတ္နှင့်ပျော့ပြောင်းပြီးဘာမျှရှိပါသည်။ ရှေးခေတ်ကာလ၌ဤကျောက်သည်ဇိမ်ခံကား, စည်းစိမ်ဥစ္စာ, အထက်တန်းလွှာများ၏ယုဂျထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ, ဘားရို့ခေတ်အတွက်မြင့်မားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ဆင်မြန်းတွေနဲ့ပန်းထိုးပုလဲနှင့်ရှုပ်ထွေးလိမ်ယှက်နှင့်အတူအလှဆင်ရှိသည်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနည်းငယ်ရာသီလွန်ခဲ့တဲ့ဤကျောက်သာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးဝတ်ဆင်ထားသည်။ အခုတော့သူ့အဘို့မဖက်ရှင်ကျောနောက်တဖန်ကမဆိုအသက်အရွယ်မှာအဆင်းလှသောလိင်ကိုက်ညီသောသိသာဖြစ်လာခဲ့သည်။
မြ - ရှားပါးခြင်းနှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လှပသောသောကျောက်။ မိမိအ velvety ကြွယ်ဝသောအရောင်လစျြလြူရှုမဆိုထိုမိနျးမစွန့်ခွာမည်မဟုတ်။ ဒါကအထက်တန်းလွှာများအတွက်ဂန္ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုမတ်မတ်အရာတွေနဲ့လှပြင်ဆင်ရေးခေတ်မီချေးငှားသည်ပင်အရုပ်ဆိုး, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်ကစားပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ဓာတ်သတ္တု Self-လုံလောက်ပေမယ့်လိုအပ်ပါကအခြားရတနာနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာအများအပြားထုတ်လုပ်သူရှိပါတယ် လက်ဝတ်ရတနာ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏။ ရွှေပုတီး-prodevki Adamas - စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအလွန်ကြီးစွာသောဟန်ချက်။
ပုတီး, ဘောလုံးနှင့်အတူ broaches
ပုတီးကိုဝယ်ဖို့မလိုအပ်, ထူးခြားသောကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်, ကျောက်ခဲနှင့် broaches ။ လှပသောအစိုင်အခဲပုံစံမျိုးစုံသို့မဟုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆံပင်ကောက်ကောက်၏အခြေစိုက်စခန်းမှာဖြစ်ကြောင်းအများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဘောလုံး, ကြယ်နှလုံးသားများ, စိန်ပွင့်, စတုဂံရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလှဆင်ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များ, ဒါပေမယ့်ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီးမသာကိုက်ညီ။ reserved နှင့် laconic မော်ဒယ်များနေ့စဉ်နှင့်ပွဲလမ်းသဘင်ခါးပန်းကိုနှစ်ဦးစလုံးအနေနဲ့မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
နီလာခရမ်းရောင်နှင့်အတူ Prodevki ပုတီး
နီလာခရမ်းရောင် - လင်းကျောက်များစျေးအကြီးဆုံးအမျိုးမျိုး။ ယင်း၏အရောင်အတွက်သူအမျိုးမျိုးသောအရိပ်နှင့်ဖန်ထည်သို့မဟုတ်ပုလဲတောက်ပ၏င့်လင်းမြင်သာအတူပြင်းထန်သောခရမ်းရောင်အရောင်ပေါင်းစပ်။ ခေတ္တမျှပိတ်သောကျောက်အပူအားဖြင့်အရောင်ဆုံးရှုံးနှင့်အစိမ်းဖျော့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ဖြစ်လာသည်။ ဤသည်လက်ဝတ်ရတနာလောကီသားတို့သည်အမျိုးစုံမှဖြစ်နိုင်စေသည်။ ဒီကျောက်မျက်ကြော့ရှင်း add နှင့်အမျိုးသမီး၏သဘာဝအလှတရားကိုပေါ်လွင်ပါလိမ့်မယ် Long ကပုတီး, broaches ။ သဘာဝကနီလာခရမ်းရောင်သင်ကမတတ်နိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောက်ပါအားသာချက်များရှိပြီးသောတုနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
လက်ဝတ်ရတနာဤအမျိုးအစားအဘို့အဘယ်သူမျှမအသက်ကန့်သတ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်အကောင့်ထဲသို့မော်ဒယ်ဒါပေမယ့်လည်းသင်ကဝတ်ဆင်လိမ့်မည်သည့်နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ခုသာယူရမယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါ။ ပုတီး, စကား, ကျောက်တွေနဲ့ချယ်လှယ်ကြပြီ, တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ပေါ့အဝတ် ။ အဆင့်အတန်း၏ဖြစ်ရပ်စဉ်းစားကြည့်ပါနှင့်။
ထွားမင်းသမီးရှည်လျားအလှဆင်ရှေးခယျြသငျ့သညျ, သငျပုတီးရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ဘဲဥပုံအသွင်သဏ္ဌာန်၏ပိုင်ရှင်များတစ်အကြီးအကျယ်အခြေစိုက်စခန်း (ချယ်လှယ်ကြပြီကျောက်များသို့မဟုတ်ပုလဲ) နဲ့ broaches, မဟုတ်ရင်လူတစ်ဦးလည်းဆန့်ပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
မျက်စိအလှစနစ်တကျအရွယ်အစားသောကျောက်အရောင်ကို အသုံးပြု. အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်ဆွဲပုတီးသင့်ရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့အညီအများဆုံးဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ပုတီးဖြစ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အဝါရောင်သို့မဟုတ်ငွေ, ရွှေဖြူ broaches - သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်အကြီးအကြည့်ပေမယ့်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သည့်နှင့်စတိုင်အသှငျအပွငျအဘို့အကပုံရိပ်ကိုအကြောင်းကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန် သာ. ကောင်း၏:
ပုတီး, အနက်ရောင်ပုလဲနှင့်အတူစကားတစ်စုံလင်သောအဖြည့်ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကနူးညံ့ကြင်နာမှု, လျှပ်နှင့်ကြော့ရှင်းပေးပါ။ လေးကိုလက်ကောက်တစ်လက်စွပ်သို့မဟုတ်တူညီသောကျောက်ခဲနှင့်တစ်ဦးလည်ဆွဲနှင့်အတူပြီးစီးရန်။
စံပြသပ်သပ်ရပ်ရပ်သတိပညာပုတီးတစ်လျှောက်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်, သေးငယ်တဲ့ကြောနှင့်အတူ broaches ။
ဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ဇိမ်ခံ, အဆင့်အတန်းနှင့်အမြိုးသမီးမြား၏ကောင်းသောအရသာပေါ်လွင် prodevki စိန်နှင့်အတူပုတီး။ ဒါဟာသင်ကိုယ်သင်အာရုံစိုက်မှု၏ဗဟိုကိုရှာဖွေခညျြနှောငျနေဘယ်မှာအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ, များအတွက်စုံလင်သည်။ stylist အနေနဲ့ဖော်ပြလုပ်-Up လုပ်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်အကြံပြု, ဒါပေမယ့်လည်းတောက်ပဘူး။ မြင့်မားတဲ့ဆံပင်အတွက်စုဆောင်းဖို့အလှဆင်, ဆံပင် pin ကိုသို့မဟုတ်ပိုကောင်းအာရုံစိုက်နိုင်ရန်အတွက်။
နေ့စဉ်ပုတီးကိုရွေးကောက်ပြီးအဘို့, စိန်, နှလုံးသားများ, ကြယ်များ, ပန်းများ, လိမ်, ဘောလုံး, အရာသီခွင်၏သေးငယ်တဲ့အရိပ်လက္ခဏာများ၏ပုံစံကိုတစ်အလှဆင်ဒြပ်စင်နှင့်အတူ broaches ။ ထိုကဲ့သို့သောအလှဆင်ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များ, ဒါပေမယ့်လည်းမသာကိုက်ညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမြိုးသမီးတ ။ လက်ျာမော်ဒယ်ရွေးချယ်ဖို့အဓိကအရာ။
မတူကွဲပြားမှု၏မျက်နှာသာအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြေရင်းရပ်ဆိုင်းမှုအမျိုးမျိုးဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်အလိုတော်မှာသူတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့်တစ်ချိတ်၏ပုံစံကိုဖန်ဆင်းသောပုတီး, စကားရှိပါတယ်။ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောကျောက်များနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးမဆိုကိန်းဂဏန်း၏ပုံစံရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, တစ်ခုတည်းအလှဆင်နေ့တိုင်းအတူသင်အသစ်များပုံရိပ်တွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Mink လုပ်ထားတဲ့လက်အိတ် - နှင့်မည်သို့စတိုင်ကိုကြည့်ဖို့ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်သနည်း
Garnet နှင့်အတူလက်စွပ် - သဘာဝကသလဲသီးနှင့်အတူလှပသောကွင်း၏ 32 ဓါတ်ပုံ
IVF မှ Turn
ကျောက်ကပ်ကျောက်များအနေဖြင့်နေကြာ၏အမြစ် - စာရွက်
မင်္ဂလာဆောင်မိတ်ကပ် - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
အနီရောင် Dress 2013
Aureus - အစဉ်အမြဲအဘယ်အရာကြောင့်ဖြစ်ပြီး, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားရှိမရှိ?
Simoron နည်းပညာ - ထုံးတမ်း, အရေးယူအတွက်သက်သေပြ